Search ကလေးလိုး - BajarFB.com
Search Results - ကလေးလိုး
ဝအိုင်းနီ နော် ကလေးလး😁😁😘
ဝအိုင်းနီ နော် ကလေးလး😁😁😘 Yoe Thar 11 Jun · 186 views
ကလေးလုံး Sai Htet Aung 10 Jul 2020 · 156 views
💝💝မေမေတို့ရဲ့ချစ်စရာ အသည်းလေးတွေ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက် သွက်လက် စေဖို့ ခေတ်ပေါ်ကစားစရာ ( Educational Toy )💗💗
😍😍ဒီခေတ်ကလေးလေး တွေက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သွက်လပ်ထက်မြက် နေကြတာ ဘာလို့ပါလိမ့် ??🥰🥰 👉👉မေမေ နဲ့ ဖေဖေ တို့က ကလေးလး ငယ်စဉ်ထဲက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ထက်မြက်စေမယ့် ကစားစရာလေး တွေနဲ့ ကစားရင်း ပျော်ပျော်ကြီး လေ့ကျင့်ပေးထား ကြလို့ပါ။👈👈 💙💯သာမန် အရုပ်လေးတွေနဲ့ကစားရတာ ဟာ ရိုးအီနေတဲ့ baby လေးတို့အတွက် ဒီလို အရုပ်လေးက ပျော်စရာလည်း ကောင်းသလို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေဖို့ ကို တဖက်တလှမ်းကနေ အထောက်အကူပြုတော့ မေမေတို့လည်း ဝယ်ပေးရကြိုးနပ်ဘီပေါ့ ။💯💙 😇တီတီဟန်နီ ဆီမှာ ပဲ ဝယ်လို့ ရတဲ့ အဆန်းလေးပါနော် 😍ဉာဏ်သုံးရတာလေးမို့ ဘေဘီလေး တို့ အတွက် Problem solving skill တိုးတက်စေပါတယ် ရှင့်. ဒီအရုပ်လေးက ကလေး အသက် ၂ နှစ်ကနေ စပြီး ပေးဆော့လို့ရပါတယ် ။ ✅ စျေးနှုန်း - 19000 Ks ✅ 🏆ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက Facebook Chat box မှတဆင့် (သို့) 📞Phone : 09759742317 သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူလို့ရပါတယ်… 😍 ရန်ကုန် မြို့တွင်း မှ မှာယူထား သောပစ္စည်းများ ကို Order တင် ပြီး ၂-၃ ရက်အတွင်းအိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်..🚘🚗 . 😘နယ်မှ Customer များအနေဖြင့် ပစ္စည်းမှာယူလိုပါက ဘဏ်/Mobile Banking/wave money/ Kpay ဖြင့်ငွေအရင်လွှဲပေးရပါမယ်။ ငွေလွှဲဝင်ပြီးလျှင် ၁ရက်အတွင်း ကားဂိတ် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်..🚚🚌 🏡 ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူလိုပါက 👇👇👇 အမှတ် ၃/၂၄, ကံ့ကော်မြိုင် ၂လမ်း၊ ပါရမီရိပ်သာ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မြို့… ☎️📌📌📌☎️( လာဝယ်ဆိုရင် ဖုန်းလေးတချက် ကြိုဆက်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်.. အိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်တဲ့ တိုးနေမှာစိုးလို့ပါ)☎️📞📞📞☎️ 🍭🤹♀️🎡🎢 TT Honey’s Baby Mall မှာ ကလေးလေးတွေ အတွက် Quality အရမ်းကောင်း ပီး Safe ဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပဲရောင်းပါတယ်…. 🚀ကလေးများအားလုံးပျော်ရွှင်ဖို့ TT Honey Baby Mall မှာ စျေးဝယ်စို့.. TT Honey's Baby Mall 15 Aug 2020 · 65K views
ကိုယ့်ကိုဘဝ ကိုယ်အနာဂတ် က်ိုယ်ကိုနှလုံးသား ကိုယ့်ကိုအသဲ ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်ရတဲ့ ကလေးလး ဒီနေ့ကလေးလေးနဲ့ကိုဖစ်တာ သုံးလပြည့်သွားပီး😍😍😘😘
ကိုယ့်ကိုဘဝ ကိုယ်အနာဂတ် က်ိုယ်ကိုနှလုံးသား ကိုယ့်ကိုအသဲ ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်ရတဲ့ ကလေးလး ဒီနေ့ကလေးလေးနဲ့ကိုဖစ်တာ သုံးလပြည့်သွားပီး😍😍😘😘 Min Ko Ko 18 Sep · 33 views
😍😍ဒီခေတ်ကလေးလေး တွေက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သွက်လပ်ထက်မြက် နေကြတာ ဘာလို့ပါလိမ့် ??🥰🥰
😍😍ဒီခေတ်ကလေးလေး တွေက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သွက်လပ်ထက်မြက် နေကြတာ ဘာလို့ပါလိမ့် ??🥰🥰 👉👉မေမေ နဲ့ ဖေဖေ တို့က ကလေးလး ငယ်စဉ်ထဲက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ထက်မြက်စေမယ့် ကစားစရာလေး တွေနဲ့ ကစားရင်း ပျော်ပျော်ကြီး လေ့ကျင့်ပေးထား ကြလို့ပါ။👈👈 💙💯သာမန် အရုပ်လေးတွေနဲ့ကစားရတာ ဟာ ရိုးအီနေတဲ့ baby လေးတို့အတွက် ဒီလို အရုပ်လေးက ပျော်စရာလည်း ကောင်းသလို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေဖို့ ကို တဖက်တလှမ်းကနေ အထောက်အကူပြုတော့ မေမေတို့လည်း ဝယ်ပေးရကြိုးနပ်ဘီပေါ့ ။💯💙 😍😍ဒီအရုပ်လေးကတော့ ဆော့တဲ့ သားသားမီးမီး တွေရော ဝယ်တဲ့ ဖေဖေမေမေ တွေရော အရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ အရုပ်လေးပေါ့။ 😍😍 ✅တီးလုံးသံလဲထွက်တယ်... ✅ဘောလုံးလေးတွေလဲ ပါတယ်.. ✅လက်ဆောင်ပေးလဲထည်တယ်.. 😘အဲ့တာ ကိုမှ ၂၀၀၀၀ ကျပ်တည်းဆိုတော့ အရမ်းတန်နေပီနော် မေမေတို့ရေ..🤩 ✅❇️ပတ်လမ်းလေးတွေကို ခလုတ်လေးတွေနဲ့ ဆော့တဲ့သူကိုယ်တိုင် နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ဆော့ရတာမို့ သားသားမီးမီး တွေအတွက် အတွေးအခေါ်နဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ထက်မြကိစေပါတယ်။❇️✅ 🏆ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက Facebook Chat box မှတဆင့် (သို့) 📞Phone : 09759742317 သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူလို့ရပါတယ်… 😍 ရန်ကုန် မြို့တွင်း မှ မှာယူထား သောပစ္စည်းများ ကို Order တင် ပြီး ၂-၃ ရက်အတွင်းအိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်..🚘🚗 မန်းလေးနေပြည်တေယ် လဲ အိမ်အရောက်ငွေခြေရပါတယ် ၄ ရက်ခန့်စောင့်ရပါမယ်... . 😘နယ်မှ Customer များအနေဖြင့် ပစ္စည်းမှာယူလိုပါက ဘဏ်/Mobile Banking/wave money/ Kpay ဖြင့်ငွေအရင်လွှဲပေးရပါမယ်။ ငွေလွှဲဝင်ပြီးလျှင် ၁ရက်အတွင်း ကားဂိတ် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်..🚚🚌 🏡 ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဖုန်းလေးတချက် ကြိုဆက်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်.. အိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်တဲ့ တိုးနေမှာစိုးလို့ပါ)☎️📞📞📞☎️ 🍭🤹♀️🎡🎢 TT Honey’s Baby Mall မှာ ကလေးလေးတွေ အတွက် Quality အရမ်းကောင်း ပီး Safe ဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပဲရောင်းပါတယ်…. 🚀ကလေးများအားလုံးပျော်ရွှင်ဖို့ TT Honey Baby Mall မှာ စျေးဝယ်စို့.. TT Honey's Baby Mall9Nov 2020 · 31K views
တီရှပ္လား အ‌ေ နြး လား ကလေးလး လျူကီးလား Baby ျကိုက္ရာ‌ေ ရြး😁😁 ၁၂မတိုင္ခင္ ‌ေ ငြလြဲရပါမယ္ရှင့္ ရန္ကုန္အိမ္‌ေ ရာက္‌ေ ငြခ်ေပါရှင့္
တီရှပ္လား အ‌ေ နြး လား ကလေးလး လျူကီးလား Baby ျကိုက္ရာ‌ေ ရြး😁😁 ၁၂မတိုင္ခင္ ‌ေ ငြလြဲရပါမယ္ရှင့္ ရန္ကုန္အိမ္‌ေ ရာက္‌ေ ငြခ်ေပါရှင့္ Amazing Online Shopping 419 views · Was live